आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबारे संघीय संसदमा छलफल सुरु « News24 : Premium News Channel
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबारे संघीय संसदमा छलफल सुरु
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटबारे संघीय संसदमा आजबाट छलफल सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा समग्र र मन्त्रालयगत बिनियोजित बजेटमा आइतबारसम्म छलफल हुने छ । छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डा. मीनेन्द्र रिजाल र मानबहादुर विश्वकर्माले प्राथमिकता विहीन बजेट सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता भरणपोषणमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन् ।
चुनावी आकर्षक नारा छाडिएको, यथार्थभन्दा बाहिर रहेको बजेटले ऋणको भारी बोकाएको र अर्थमन्त्रीले हठका भरमा आर्थिक समृद्धि संभव छैन भनेर स्वीकारेको उनीहरुको टिप्पणी थियो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजेन्द्र गौतमले समृद्ध नेपाल निर्माणका बजेट प्रभावकारी हुने भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, खानेपानी, औद्योगिकरण र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले बजेट महत्वपूर्ण रहेको उनीहरुको दावी थियो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शरतसिंह भण्डारीले संघीय संरचनाअनुसार बजेट बिनियोजन नगरिएको र तराई–मधेसलाई विभेद गरिएको गुनासो गर्नुभएको थियो । स्वतन्त्र सांसद प्रेम सुवालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समाजवाद उन्मुख नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बेला सकारात्मक बजेट आएको दावी गर्दा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संसदीय क्षेत्रका लागि बजेट पाउनु पर्ने माग सबै सांसदको नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउनु भएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले आफूलाई ‘राजनीतिक ट्रयाप’मा पारिएका संसदीय क्षेत्र विकासका लागि बजेट छुट्याउन बाध्य भएको बताउनु भएको थियो ।